According to the World Health Organization’s weekly report on COVID-19, the Delta and Alpha viruses are most prevalent in most parts of the world, including Myanmar. Delta,avariant of the coronavirus; Alpha Beta and Gamma. Alpha covers 182 countries in the country. Delta covers 135 regions; Beta covers 132 regions; According to the report, Gamma has spread to 81...
ကယားပွညျနယျက စဈဘေးရှောငျ ‌၃၄၀၀ ကြျောရှိလာပွီး ရိက်ခာလုံလောကျမှုမရှိသညျ့ အခွအေနဖွေဈလာနိုငျ
ကယားပွညျနယျ(ကရငျနီ)အတှငျး တိုကျပှဲပွနျလညျဖွဈပှားခဲ့တာသောကွောငျ့ ရှာနှဈရှာထပျမံတိုးလာ၍ လကျရှိဘောလဲမွို့နယျအတှငျး စဈဘေးရှောငျဦးရေ ၃၄၄၁ ဦး ဖွဈလာသောကွောငျ့ ရိက်ခာလုံလောကျမှုမရှိသညျ့အနအေထားဖွဈလာနိုငျကွောငျးစဈဘေးရှောငျကူညီကယျဆယျရေးတာဝနျခံတဈဦးကမဇ်ဈိမကိုပွောသညျ။”ရှာနှဈရှာကနေ လူ ၉၀၀ ထပျတိုးလာတာပါ။ စုစုပေါငျး ၃၄၄၁ ဦးပါ။ အခုက ပွေးလာတဲ့အထဲမိနျးကလေးပိုမြားတယျ။ ရိက်ခာက‌လဲ ၃ ရကျလောကျအထိတောငျ့ခံ‌နိုငျပမေယျ့ မလုံလောကျလို့ရရှေညျမှာရိက်ခာပွတျသှားနိုငျတဲ့အတှကျရိက်ခာလိုအပျခကျြတှရှေိနပေါတယျ”ဟု၎င်းငျးကပွောသညျ။ လကျရှိတှငျ ယငျးစဈဘေးရှောငျမြားအနကျ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိူးသမီးမြား၊ သကျကွီးရှယျအိုနှငျ့ကလေးငယျမြားအတှကျလိုအပျသညျ့ ဆေးဝါးဆိုငျရာပစ်စညျးမြား၊ ရာသီဥတုကွောငျ့မိုးယိုသညျ့အတှကျ အမိုးအကာမြားလညျးလိုအပျနကွေောငျးစဈရှောငျတာဝနျခံမြားကဆိုသညျ။လကျရှိအနအေထားအရ တိုကျပှဲခတ်ေတငွိမျနသေျောလညျး အကွမျးဖကျစဈကောငျစီဘကျမှ နနျးဖဲ၊ကလိလြား တောခူအုပျစု ရှာခံမြားအားစဈဆေးခွငျး၊ အဆိုပါကြေးရှာမြားသို့ယခငျရကျမြားက လကျနကျကွီးမြားဖွငျ့ထိုးစဈဆငျပဈခတျခွငျးကွောငျ့ နောကျပိုငျးထပျမံပွုလုပျမညျဆိုပါက စဈဘေးရှောငျစခနျးမြားအတှကျစိုးရိမျဖှယျရာရှိကွောငျး တောခူရှာဒသေခံတဈဦးကပွောသညျ။ “စစခွငျးတိုကျပှဲဖွဈတဲ့ရကျကဆို လကျနကျကွီးနဲ့ အလုံး ၅၀ လောကျထုတယျ၊ ၁၆ ရကျကနေ ၁၉ အထိတောကျလြှောကျလကျနကျကွတှနေဲ့ရှာဘကျတှကေိုပဈပွီးလမျးကွောငျးရှငျးတယျ၊ဘေးပတျဝနျးကငျြရှာ‌တှထေိလကျနကျကွီးတှကြေ တော့ရှာထဲကလူတှအေကုနျကွောကျလနျ့ပွီးပွေးကုနျတာ။အဲ့ဒီအတှကျစဈကောငျစီဘကျကဆကျပွီးလုပျရငျ IDP Camp(စဈဘေးရှောငျစခနျး)တှကေိုလကျနကျကွီးတှကေနြိုငျတဲ့အတှကျစိုးရိမျဖှယျရာရှိတယျ”ဟု ၎င်းငျးကပွောသညျ။ လကျရှိအခွအေနမှော ယမနျနေ့ ဇူလိုငျလ ၂၁ ရကျနှငျ့ ယနအေ့ခြိနျအထိတိုကျပှဲမြား ခတ်ေတငွိမျသကျနေ၍...
ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အကယ်ဒမီ ဦးမြင့်အောင်၏ဇနီး၊ ထပ်ဆင့်အကယ် ဒမီ မင်းသမီး မို့မို့မြင့်အောင်၏မိခင်ကြီး အသက် ၉၉ နှစ်အရွယ် ဒေါ်သန်းရင် သည် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက လူကြီးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ မို့မို့မြင့်အောင်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနုပညာရှင်များနှင့် ပရိသတ်များအား သူ့မိခင်ကွယ်လွန်သွားသည့်အကြောင်းကို လူမှုကွန်ရက်က အသိပေးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ” မို့ ကြေကွဲစွာခံစားနေရပါတယ်။ မို့ မိခင်ကြီး အသက်(၉၉)နှစ် ၃၀-၉-၂၀၂၀ နေ့လယ် ၁ နာရီ ၅မိနစ်မှာ လူကြီးရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွားပါပြီ။ မို့ ခံစားနေရသလို သဲသဲတုန်လေးတွေလည်း ခံစားနေရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနက်ဖြန် ဖွားမာမီရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်မပို့ကြပါနဲ့ မို့ အများကြီးနားလည်မှုရှိပါတယ်။ Covid နဲ့ Lockdown ကြောင့်မို့ပါ။ မို့ စာအများကြီးမရေး နိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ ” ဟုယင်းကရေးသားထားသည်။
မြို့နယ်နှင့် ခရိုင်ဆေးရုံများတွင် ရောဂါအမြန်စစ်ဆေးနိုင်သော Test Kit များကို ယနေ့ စတင် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မြန်စစ်ဆေးနိုင်သည့်အတွက် ပိုးရှိသူ ပိုမိုများပြားစွာတွေ့လာမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူသို့ အသိပေးသည်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွား မှု နောက်ဆုံးအခြေအနေကို နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြည်သူသို့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် တင်ပြခဲ့ရာ ထိုသို့ ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုးရှိသူများပြားလာ သည့် အပေါ် ပြည်သူများအနေဖြင့် စိတ်ဓာတ်မကျရန် အားပေးစကားဆက်ပြောသည်။‘‘ဒီလိုမြန်မြန် သိရတဲ့အခါ ကျတော့ စောစောစီးစီး ကုသမှု ပေးနိုင်တယ်။ ပျောက်နှုန်းက ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာမယ်’’ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆို သည်။ COVID-19 ပိုးရှိ၊ မရှိ မြန် မြန်ဆန်ဆန်နှင့် မှန်မှန်ကန်ကန် စစ်ဆေးနိုင်သည့် Test kit များ ကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ...
သာကေတမြို့နယ်ရှိ Fortune Plaza Expo ခန်းမကို COVID-19 လူနာ ၁၀၀၀ ထိကုသနိုင်မည့် ယာယီဆေးရုံ ပြုလုပ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာကေတမြို့နယ်ရှိ Fortune Plaza Expo ခန်းမကို COVID-19 လူနာ ၁၀၀၀ ထိ ကုသနိုင်မည့် ယာယီဆေးရုံ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ပြောသည်။ “Forturne Plaza Expo ခန်းမ ကို ခုတင်(၁၀၀၀)ဆံ့ယာယီဆေးရုံအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Excellent Fortune Development Group ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်းက လှုဒါန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေအတွက် လိုအပ်တာတွေ သုံးစွဲဖို့လည်း ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကိုလည်း မတည်လှူဒါန်းခဲ့တယ်”ဟု ယင်းကပြောသည်။ ယင်းယာယီ ဆေးရုံတွင် Volunteer အဖြစ် We Love Yangon ကဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ဆေးရုံအဖြစ် ပြင်ဆင်ချိန်ကို တစ်ပတ်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ယခုအခါ Forturne Plaza တွင် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ရေချိုးခန်း၊...
ဆွမ်းဦးပုညရှင်‌စေတီတွင် အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ် ပူဇော်
စစ်ကိုင်းမြို့၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ဆွမ်းဦးပုညရှင် စေတီတွင် စက်တင်ဘာ ၂၆ ညနေပိုင်းကစတင်၍ အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းအား စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ၏အဓိပတိ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးဆောင်၍ ဆရာတော်သံဃာတော်များမှ ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၆မှ ၂၈ ထိသုံးရက်တိုင်တိုင်ရွတ်ဖတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ” မြန်မာနိုင်ငံတွင်မကကမ္ဘာမှာပါ ကျရောက်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါကြီး ကင်းစင်ပပျောက်အောင် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးအမှူးပြုပြီး ဩဝါဒဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒခံယူခဲ့ပြီး ဒီနေ့ ကစအန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားတော်များရွတ်ဖတ်ပူဇော်‌တာ‌ဖြစ်ပါတယ်။ စနေ၊တနင်္ဂနွေ၊တနင်္လာနေ့ည‌တွေမှာ ရွတ်ဖတ်ပြီး အင်္ဂါနေ့မနက်မှာ အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်ပြီး ပရိတ်ရေများကို စစ်ကိုင်းမြို့အတွင်း လှည့်လည်ပြီးပတ်ဖြန်းသွားမှာပါ” ဟု စစ်ကိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ခိုင်ထွန်းက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါအန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းသည် စစ်ကိုင်းမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်း‌ဒေသကြီး အတွက်ပင်မဟုတ်ဘဲ အခြားတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များ နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ကျရောက်နေသော Covid-19ကပ်ရောဂါ ကင်းစင်ပပျောက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။